New Comics – BMA Comics Con
November 25, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – December 4 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday December 4, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for December 4. Every week DC, Marvel, and Image…
November 18, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – November 27 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday November 27, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for November 27. Every week DC,…
November 11, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – November 20 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday November 20, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for November 20. Every week DC,…
November 4, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – November 13 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday November 6, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for November 13. Every week DC,…
October 28, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – November 6 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday November 6, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for November 6. Every week DC,…
New Comic Book Release May 22, 2019
May 13, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – May 22 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday May 22, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for May 22. Every week DC,…
New Comic Book Release May 15, 2019
May 9, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – May 15 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday May 15, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for May 15. Every week DC,…
New Comic Book Release May 8, 2019
May 2, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – May 8 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday May 8, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for May 8. Every week DC,…
New Comic Book Release May 1, 2019
April 24, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – May 1 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday May 1, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for May 1. Every week DC,…
New Comic Book Release April 24, 2019
April 16, 2019 BrianNew Comicsweekly comic list
New Comic Book List – April 24 The release schedule of the comics books that are coming out from your favorite publishers on Wednesday April 24, 2019. Included are images of variant issues and links to get them at an amazing price. These are the new comics for April 24. Every week DC,…